Shiinaha Alucosun FR warshad iyo alaab-qeybiyeyaal | Alucosun
Aluminium Isku-darka Aluminium (ACP / ACM) waa badeecooyin isku dhafan oo isku daraya tayada biraha leh caag isku dheelitiran, waa badeecad jilicsan oo haddana adag oo qiimo jaban isbarbar dhig ku habboon codsiyada kala duwan sida Facade, Roof, Saqafka iyo dib-u-cusbooneysiinta codsiyada injineernimada kala duwan ama mid cusub dhismaha. Qalab bixiya fursado aan xadidnayn oo lagu qorsheeyo riyadaada.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo alaabooyin aluminium ah oo aluminium ah, Alucosun® waxay siisaa warshadaha. Kuwa ugu caansan waa badeecooyin isku dhafan ACP / ACM waxaan si fiican u tixgelineynaa shirkad awood u leh inay abuurto alaab heer caalami ah. Dheeraad ah tayada alaabooyinka aan bixinno saxeexeenna waxaa ka go'an ballanqaadyadeena iyo istiraatiijiyaddeena adeeg xirfadeed
FAA'IIDADA SOO SAARKA
Alucosun ®Aluminium Isku-darka Aluminium waa soo-bandhigeenna heer sare ee warshadaha dhismaha adduunka. Qalabka Aluminium ee loo yaqaan 'Aluminium Composite' waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin wax beddelayaal dhowr dhinacyo ah oo ku saabsan Aluminium Aluminium ah waxaa jira dhowr astaamo oo ka dhigaya mid gaar ah.
Alucosun FR®waxaa lagu tijaabiyaa oo laga xaqiijiyaa Xarumaha caanka ah ee adduunka. FR Panels Class A2 and B (EN13501) Certied halka iyo qaybaha muhiimka ah ee PE waa Class A (ASTME84) iyo Class 0 iyo 1 (BS476Part6, Part7). Intaa waxaa sii dheer, Alucosun FR waxaa loo sharciyeeyay inuu u hoggaansamo NFPA285 iyo ASTME-119.
Alucosun® alaabooyinka isku dhafan ayaa ah qalabka Miisaanka Fudud marka la barbardhigo go'yaasha macdan ee s olid, galaaska ama wajiyad la mid ah oo laga heli karo calaamadda casriga ah.
Alucosun - FR® alwaaxdu waxay ka kooban yihiin udub dhexaad leh xarun leh macdan aan guban karin si loo hubiyo heerka dabka iyo badbaadada ee warshadaha.
ACP - FR waa badeecad isku dhafan oo ka kooban Saamiga Sare ee Macdanta udub dhexaadka u ah macdanta aan buuxin karin oo buuxisa shuruudaha EN-13501 in la isku qabsado qaybta B. Wax soo saar u qalma in loo isticmaalo sida xirashada iyo wejiga hore ee dhismaha guryaha la degan yahay ama dhismayaasha ganacsiga hooseeya iyo sare kac. Intaa waxaa sii dheer waxay u hoggaansameysaa shuruudaha NFPA-285 iyo ASTM E-119.
Cabbir Cutub Heerka La heli karo
Ballaaran mm 1250, 1500 1000-2000
Dhererka mm 3050 ≤8000
Dhumucdiisuna mm 4 2-6
Aluminium qaro weyn mm 0.50 0.15-0.70
Shuruudaha Habka Imtixaanka Cutub Qiimaha
Guryaha Jirka Dhumucdiisuna - mm 4
Culeys Gaara - Kg / M3 1900
Miisaanka - Kg / M2 7.5
Them. Qabsashada ASTM C 518 W / (mK) 0.45
Them. Ballaarinta ASTM D 696 X 10-6 / ° C 24
Guryaha Farsamada Awoodda siligga ASTM E8 MPa N / mm2 49
Dheeraynta ASTM E8 % 5%
2% Cadaadis Cadaadis ASTM E8 MPa N / mm2 44
Khasaaraha Gudbinta Codka Yaraynta Buuqda ASTME413 STC 27
Gudaha Aluminium Isku-darka Aluminium Qalabka muhiimka ah ayaa door weyn ka ciyaara go'aaminta hantida dabka ee dhismaha. Iyadoo aan loo huraynin wax ka mid ah hantideeda aasaasiga ah Ocean Panels ACP - A2, ACP-FR waa alaabooyin loogu talagalay inay daboolaan dabka iyo xeerarka badbaadada adduunka oo idil.
Isbarbardhiga Waxqabadka Dabka
Dhumucdiisuna 4 4 4
Waxyaabaha Guban kara ee Muhiimka ah <10% <30% <100%
Heerarka BS / EU EN13501-1 (A2 s1 d0) EN13501-1 (B s1 d0) -
Heerarka Mareykanka NFPA 285 (Gudbey), ASTM E119 (Gudbey) NFPA 285 (Gudbey), ASTM E119 (Gudbey) -
Australia / New Zealand AS / NZS 1530.3 (Dab shidan ma jiro) AS / NZS 1530.1 (Dab shidan ma jiro) -
Jarmalka En1187 (Dhaafay) DIN41027 (Dhaafay) En1187 (Dhaafay) DIN41027 (Dhaafay) -
Imaaraadka EN13501-1 (A2 s1 d0) NFPA 285 (Dhaafay) EN13501-1 (B s1 d0) NFPA 285 (Dhaafay) -
Midabada & Dhamaadka
Midabyo kala duwan iyo ikhtiyaarro dhammayn ah ayaa ka dhigaya Alucosun ACP xulasho la jecelyahay baqshadda dhismaha. Kala duwanaanta muuqaalka, adkeysiga nidaamka rinjiga tayada dhamaadka iwm Waxay ka dhigeysaa mid ku habboon codsi kasta oo lagu xiro ha ahaato dhisme ganacsi, qaab dhismeed astaan ​​u ah aqoonsi u gaar ah ama sumad la aasaasay. Alucosun ACP waxay bixisaa jaangooyooyin kaladuwan iyo caadooyin kala duwan oo ka baxsan meesha daahan gariiradda ee gudaha. Alucosun ACP waa dusha sare ee lagu dhammeystiray PVDF iyo nidaamka rinjiga NANO ee geedi socodka daboolka isdaba-joogga ah kaas oo hubinaya tayada iyo joogtaynta u hoggaansanaanta qeexitaanka AAMA 2605.
XUMOrinjiyeyaasha waxaa loo yaqaanaa cimri dhererkooda. Waxyaabaha kiimikada ugu fiican iyo kuwa jirka ee rinjiyeyaashan tayada leh ayaa si wanaagsan loo aqoonsaday loona caddeeyay dadka isticmaala adduunka iyo naqshadayaasha afartankii sano ee la soo dhaafay haddana tanina wali way sii socotaa maalin kasta.
NANO- PVDFwaa nidaam rinji is-nadiifin ah. Nidaamka Rinjiga noocan oo kale ah wuxuu bixiyaa jaakad sare oo cad oo dheeri ah oo leh waxyaabo aad u sarreeya oo iskudhafan oo NANO ah oo ku saabsan dhammaystirka PVDF; kaas oo hubiya dusha sare ee siman. Dusha sare oo siman oo nadiif ah ayaa ka dhigaya wasakh iyo boodh isku dhafan taas oo siinaysa dhismaha marwalba muuqaal nadiif ah. Nidaamyada rinjiga ee PVDF iyo NANO waa kuwo aad u adkeysanaya 15-20 sano oo dammaanad qaad ah.
LAGA SAMEEYAYdarbiyada leh xulashooyinka kala geddisan ee dhammaadka ayaa laga heli karaa Alucosun si kastaba ha noqotee waxay ku xiran tahay waqti cayiman iyo xaddidaadyo xaddidan. Si dabiici ah loo ilaaliyo alwaaxyada lakabka anodized waa xoqan xoqan oo aad u adkeysi badan waxay bixisaa dammaanad ku saabsan 30 Sanado.
PE iyo HDPE rinjiyeyaasha ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa codsiyo badan iyada oo ay ugu wacan tahay kala duwanaanta ballaaran ee midabada iyo tixgelinta dhaqaalaha, hadda sannadaha dammaanadda waxaa lagu kordhin karaa 5 sano illaa 8 sano oo leh noocyada kala duwan ee dahaadhka.HDPE-da ayaa sidoo kale loo heli karaa sidii nidaamka rinjiga caadada ah.
In kasta oo dhaqan ahaan loo adeegsaday aluminiumka isku-darka Aluminiumku yihiin kuwo derbiyada lagu xidho iyo codsiyo xayeysiis ah, maalmahan waxa si ballaadhan loogu adeegsadaa qaybo kala duwan sida qurxinta, carwada, gawaarida sida baakadaha waaweyn, tareennada, diyaaradaha, maraakiibta, qalabka guryaha, waxyaabaha dhismaha. taas oo loo isticmaali karo iyada oo lala kaashanayo mala-awaalka naqshadeeyaha iyo naqshadeeyaha si loo arko abuurista cajiibka ah. Kala duwanaanta codsiyada waxay nagu dhiirrigelineysaa inaan raadino oo aan horumarinno dhammeystirro aan caadi ahayn si loo kiciyo xiisaha bixinta ikhtiyaarrada aan xadidnayn. Qaar ka mid ah dhammeystirka waaweyn ee laga heli karo alaabooyinkayada Aluminiumku waa kuwa hoos ku xusan, hase yeeshee halkan kuma koobna; hadaad qiyaasi karto waanu abuuri karnaa.
ID MID AH
※ DABIICIGA - COPPER, ZINC, TITANIUM STAINLESS steel
Qalabka Rinjiyeynta Pvdf
ALMIINUM PVDF COATING
S.No Halbeegyada Heerka Imtixaanka Natiijo
1 Gloss @ 60 darajo ASTM D 523 20-80
2 Qaab-dhismeed (T-foorar) ASTM D1737-62 2T, dildilaac la'aan
3 Dib-u-noqosho saameyn-crosshatch NCCA II-5 No qaado off
4 Qalbi adag-qalin ASTM D3363 H2H
5 Ku dhejinta ASTM D3359 No qaado off
Qalalan Habka 8 No qaado off
Qoyan 37.8 ° C, 24 saac No qaado off
Biyo karkaraya 100 ° C, 20 daqiiqo
6 Rinjiga Rinjiga (μm) AAMA2604 25-36 μm waxay kuxirantahay lakabyada lakabyada
7 Iska caabin ah xoqid ASTM D968-93 40 l / mil
8 Diidmada Kiimikada ASTM D1308-87 Isbadal majiro
Caabbinta Acid ASTM D1308-87 Isbadal majiro
Cadaadiska Alkali ASTM D1308-87 Isbadal majiro
Iska caabinta xallinta AAMA 2605-05 Isbadal majiro
9 Imtixaanka cimilada-o-mitir: ASTM D2244-93 Ugu badnaan 5 cutub 10 sano kadib
Midab haynta ASTM D523-89 Min 50% 10 sano kadib
Edeynta Gloss ASTM D4214-89 Ugu badnaan 8 cutub oo midabbo ah & 6
Diidmada nuuradda Caddaan 10 sano kadib
10 Iska caabbinta milixda ASTM B117-90 Gudub (400 saacadood X5% NaCl)
11 Caabbinta huurka ASTM D2247-94 Ma jiraan wax nabarro ah Ka dib 4000 saacadood, 100% RH, 38 ° C
Habka Lagu Taliyay ee Nadiifinta
Baaxadda iyo dabeecadda maydhista dhismuhu waxay ku xirnaan doontaa maaddada ama nidaamka, juqraafi ahaan meesha uu ku yaallo iyo booska dhismaha dhexdiisa, iyo heerka nadiifinta ee loo baahan yahay. Dayactirka caadiga ah waa shaqo guud ahaan loo aqoonsan yahay inay tahay lagama maarmaan si loo gaaro adkeysiga la filayo.
U hogaansanaanta soo-saareyaasha ama alaab-qeybiyeyaasha talooyinka dayactirka Inta lagu guda jiro nadiifinta, qalabka marin u helka sida jaranjarooyinka, istcimaalayaasha, miisaanka wareega, jeex jeexyada ama wixii la mid ah, waa in lagu diyaariyo suuf si looga ilaaliyo saameynaha in waxyeello soo gaarto. Nadiifinta aan habooneyn ee keenta dhaawaca lakabku ma dabooli doono shuruudaha iyo shuruudaha dammaanadda sheyga.
Ha isticmaalin dareeraha adag ee dabiiciga ah.
Ha isticmaalin alkali adag, aashito adag ama nadiifiyeyaal wax xoqin. Haddii mirahaas iyo nadiifiyeyaashan la adeegsaday, midabku wuu barari karaa, jajabi karaa ama dillaaci karaa.
Ha u isticmaalin biyo cadaadis sarreeya si aad u nadiifiso maxaa yeelay taasi waxay dhaawac u geysan kartaa shaabaddii wadajirka ama waxay sababi kartaa in rinjiga laga saaro. Biyaha qarxinaya laguma talinayo.
Ha ku qasin nadiifiyeyaal kala duwan. Haddii nadiifiyeyaashu u baahdaan in la isku daro, waxa la raacayaa tilmaamaha soo saarista.
Iska ilaali heerkulka ba'an si aad u nadiifiso dusha sare ee dusha sare leh. Meelaha kuleylka kuleylka kuleylka ah (kor ku xusan 40 ℃) ayaa dardar galin kara falcelinta kiimikada waxaana laga yaabaa inay uumi baxaan biyaha xalka haray haraaga iyo wasakhda. Taas bedelkeeda, heerkulka aadka u hooseeya wuxuu ku siin karaa saameyn nadiifin oo liidata.
Alucosun ®hawlgal ah Wisdom Metal Composites Ltd oo keena wax soo saar heer sare ah iyada oo lala kaashanayo xarunteena wax soo saar ee dabaaldega oo ku taal Jiangsu, oo leh qiyaastii labaatan sano oo waayo-aragnimo hodan ku ah Aluminium Panel Panel. Alucosun a®summad bixinaysa dhammaan baahiyahaaga guddi dhismeedka, Lagu qalabeeyay dhammaan tas-hiilaadka gudaha si loo hubiyo wax soo saarka tayada iyo ballanqaadyada gaarsiinta. Waxaan bixinaa alaabooyinka ugufiican ee kaamil ahaanta kama dambaysta ah; oo lagu gaadhay iskudhaf habboon oo khubarada warshadaha ah, tikniyoolajiyaddii ugu dambaysay iyo mishiino casri ah Xarun la aasaasay oo soo saarta in ka badan 10Million M2 sanadkiiba, oo leh saddex (3) dhir oo loogu talagalay soosaarida Guddi kala duwan, Dahaarka Midabka oo ay weheliso Sheybaarka Guriga dhexdiisa iyo Warehouse.
Alucosun®wuxuu ka shaqeeyaa Bariga Fog, Bariga Dhexe, Latin Amerika, Yurub iyo Ameerika. Xafiisyadayada goboleed, shuraakada ganacsiga, wakiilo iyo qeybiyeyaasha dhamaan gobolka oo dhan waxay noo suurta gelisay inaan buuxino shuruudahaaga agabkeena qaab dhismeedka iyo adeegyada taageerada meelkasta oo aad uga baahato.
Hore: Alucosun FR A2
Xiga: Alucosun PE